ယနေ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာတို့အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲ | News Bar Myanmar
ယနေ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာတို့အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို တတ်အားသရွေ့ ကူညီနေကြတာ အားလုံးလည်း မျက်မြင်ပါပဲ။ ယနေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ နွေဦးတော်လှန်ရေး ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲရဲ့နာမည်ကိုတော့ “미얀마의 봄- နွေဦးတော်လှန်ရေး” လို့ အမည်ပေးထားပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Gyeonggi Art Center မှာ ကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံပါသည်။ 우리는 미얀마의 민주주의를 지지합니다 . 미얀마의 봄을 응원합니다. ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဒီပြပွဲကို စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ နွေဦးတော်လှန်ရေး ယဉ်ကျေးမှု ပြပွဲမှာတော့ Gyeonggi ဒေသ တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် တက်ရောက် လေ့လာမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံရောက် ဆရာမ ချမ်းမြမြသော်မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာကျောင်းသားတို့ ကြိုးစားသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း၊ သီချင်းသီဆိုခြင်းနဲ့ ပြဇာတ်တို့ကိုလည်း တင်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာ ကျောင်းသားတွေပါပဲ။ ဒီပြပွဲကိုတော့ Youtube မှတ်ဆင့်လည်း ပွဲစတင်တဲ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် နေ့လည် ၃ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ ခွဲမှ) စတင်ကာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
သွားရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုလို့ရအောင် Link ကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို အဖက်ဖက် က မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် တစ်တပ်တစ်အား ကြိုးပမ်းပေးနေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာကျောင်းသားများ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို အမှန်တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Source: 미얀마의 봄- နွေဦးတော်လှန်ရေး – Page
Photo: 미얀마의 봄- နွေဦးတော်လှန်ရေး – Page
Next ယောကျ်ား​လေး idol ​တွေ တစ်ခါမှ မရဖူး​သေးတဲ့ စံချိန်သစ်ကို ချိုးလိုက်ပြန်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် V »
Previous « K netizen တွေရော Rosé ဖေဖေ ကပါ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က Protester (Rosé Fan Boy) လေး